Nhau - Mhando dzemabhureki calipers
Mhando dzebrake calipers
Midhudhudhu idiki pane mota, saka inoda shoma simba rekubhureki. Kunyange zvakadaro, mune dzimwe nzira, kukwanisa kwemudhudhudhu kunonoka kana kumira kunokosha kupfuura dzimwe motokari. Ungabvunza izvozvo? Zvakanaka, kunyangwe madiki fender bender anogona kuuraya nekuti mutyairi haana kuchengetedzwa. Zvakakosha kudzivisa njodzi kana uchikwira mudhudhudhu. Asi rudzii rwemabrake pliers anodiwa nemidhudhudhu?
Mhinduro yacho iri nyore uye yakareruka. Kusiyana neakakura macaliper anoshandiswa mune dzimwe mota nemarori, mabhureki emudhudhudhu anofanira kuchengetwa ari madiki kudzivirira kuremedza bhasikoro uye kuvharira mabhasikoro. Midhudhudhu brake pliers inowanzo gadzirwa nezvinhu zvakareruka (senge aluminium), uye aruminiyamu inewo
Inowedzera mukana wekudzivirira ngura. Mimwe midhudhudhu yakakura uye ine simba kupfuura mamwe midhudhudhu. Zviripachena, mabhasikoro aya anoda mamwe mabhureki. Zvizhinji zvidiki
Mabhasikoro ane simba repasi achiri kushandisa mabhureki edhiramu, asi mabhasikoro makuru mazhinji ava nemabhureki edhisiki - kunyanya pamavhiri epamberi. Kuti uwedzere simba rekubhureki, macalipers pamidhudhudhu ine simba anowanzo kuve nemapiston akawanda. Mamwe ane maviri kana kunyange mana pistons, nepo mamwe anogona kusvika gumi nemaviri pistons mune imwechete caliper. Midhudhudhu mizhinji ine simba remabhureki rakakura kupfuura rinodiwa nekuda kwehuremu hwadzo - asi sezvatakambotaura, haisi pfungwa yakaipa kana uchikwira mota dzinomhanya, dzisina kudzivirirwa.
Pamidhudhudhu, macalipers epamberi anogadziriswa kumberi kweforogo - musangano wesimbi unobata mavhiri epamberi uye kumiswa panzvimbo uye inotsigira mabatiro. Kusvikira munguva pfupi yapfuura, macalipers akaiswa kune forogo yepamberi nemabhaudhi anotambanudzira pamakona ekurudyi kune rotor. Mumakore achangopfuura, nekuwedzera kukurumbira kweradial disc mabhureki, tekinoroji yakashandiswa mumotokari dzemujaho, macalipers anogadziriswa kure kure neforogo nemabhaudhi anoenderana nerotor surface. Aya ma radial akaiswa calipers anoderedza kuzunguzika kwechinyakare calipers muforogo.
Nekuti dzinogara dzakafumurwa zvakanyanya kupfuura macalipers emota, uye macalipers anogona kunge ari anonyanya kuoneka pane ese mabhureki emudhudhudhu. Naizvozvo, kutaridzika kwemudhudhudhu calipers kungave kwakakosha kune vakawanda vatasvi. Muchokwadi, pendi yebrake caliper inogona kuwanikwa kubva kuchitoro chemotokari uye inogona kushandiswa kugadzirisa mudhudhudhu brake caliper. Zvechokwadi, pende yakafanana inogona kushandiswa pamotokari yemotokari. Nekudaro, nyanzvi dzinoratidza kuti chromium haifanirwe kuiswa pane caliper. Chrome plating inogona kukwezva asi inogona kuita kuti macalipers achengetedze kupisa, zvichikonzera kusakosha kwebhureki attenuation.
Rori brake caliper
Zvisingarambiki: marori uye maSUV akakura - mune dzimwe nguva akanyanya kukura. Nekuwedzera kwehukuru, kukurumidza kunowedzera. Izvi zvinoreva kuti marori nemaSUV anoda mabhureki akawanda kupfuura mota. Saka vangawanepi simba remabhureki ravanoda? Rori brake caliper. Simba remabhureki emagetsi rinoenderana nechisimba chekusunga - simba iro macalipers anogona kushandisa kune rotor pamusoro. Izvi zvinoenderana zvakanyanya nenhamba yepistoni uye nzvimbo yepamusoro yebrake pads (apo ivo vanonyatsobata rotor). Zviripachena, brake caliper ine hombe clamping simba inogona kuita kuti mota inonoke kana kumira nekukurumidza kupfuura brake caliper ine yakaderera clamping force.
Marori mazhinji anotakurwa ane macalipers anoyangarara anopa simba rakakwana rekusunga kumotokari kana aendeswa kumutengesi. Nekudaro, kana matai akakura uye zvinhu zvinorema zvakagadzirirwa rori uye nhamba huru yekutakura ikaiswa mubhodhi, macalipers akaiswa mumafekitori aya anogona kunge asina kukwana kupa simba rekubhureki rinodiwa nerori. Neraki, kune yakakura mushure mekutengesa musika wemacalipers. Mukuona kwemugadziri, marori anogona kunge aine macalipers, ayo ane nzvimbo ye5000 square millimeters (7.8 square inches) pakati pepiston uye rotor. Nzvimbo yekumusoro-yekumashure-yekutengesa callipers inogona kupetwa kaviri kuti ipe iyo clamping simba rinodiwa kune yakazara customized mota.
Mabhureki erori akawanda kupfuura mabhureki mazhinji, uye anofanirwa kutakura kupisa kwakawanda. Kupisa hakuna kunaka kune bhureki, nekuti kupisa kunogona kuita kuti bhureki riwore uye kupfupisa kureba kwebhureki. Kufefetedza kwakanaka kwemacalipers kwakakosha pakuenderera, kunoenderana braking performance. Uye zvakare, yakakura brake rotor (kana dhisiki) nzvimbo dzinogona kubatsirawo kuparadzira kupisa kunzvimbo dzakakura.
Marori nemotokari dziri kunze kwemugwagwa handidzo chete mota dzinoda mabhureki chaiwo. Zvisinei, macaliper edzimotokari dzinorema zvechokwadi zvakaoma kushandisa. Zvakatotaurwa kuti mabhureki erori anofanirwa kunzi mashandiro epamusoro.
Madhisiki mabhureki akatanga kugadzirwa kuitira mijaho. Wese munhu anoziva kuti mota dzinotyaira dzichimhanya - asi dzinofanirawo kudzika nekukasira. Mumazuva ekutanga emujaho, mota zhinji dzaive nedrum brake system, izvo zvaikonzera tsaona dzakawanda dzenjanji. Iyo disc brake system inofefeterwa zvakanaka, nokudaro kuderedza kumwe kumanikidzwa kunokonzerwa nekumhanya uye kupisa
Kuunganidza kunogona kukonzera - izvo zvinoderedza (asi hazvigone kubvisa) mabhureki attenuation. Nekufamba kwenguva, aya mabhureki ane simba anopinda zvishoma nezvishoma mumotokari dzinenge dzisina kusimba. Iye zvino, vanogona kuwanikwa mumotokari zhinji dzehupfumi. Zvakangodaro, mota dzemhando yepamusoro dzinoramba dziri musika mukuru wemabhureki ari nani uye akasimba, uye shanduko mune yekutanga caliper dhizaini inobatsira aya mabhureki kupa yakanakisa braking simba.
Pane zvimwe zvirambidzo zvekuti mangani mabhureki uye mabrake pliers avo anogona kumisa mota. Kunyange zvazvo vangamisa mavhiri, kubata kwemavhiri kunotsamira pakubata matai, uye mabhureki akavandudzwa haabatsiri. Nekudaro, kune nzira dzinoverengeka dzekuvandudza mabrake callipers. Zvimwe zvezvakajairwa zvemhando yepamusoro brake caliper zvinosanganisira:
MaPistoni makuru - akakura mapistoni, uye yakakura nzvimbo yavanosangana nayo mabhureki mapedhi, iyo yakakura simba rekumanikidza ravanaro pa rotor.
Mamwe mapistoni - iyo yakaderera yekupedzisira inoyangarara caliper ine piston mukati. Iyo yakaderera yekupedzisira yakagadziriswa callipers ine peya imwe chete yepistoni, iri pamativi ese eiyo rotor disc. High performance calipers inogona kuva nemapini akawanda kana mapeya emapini akaiswa kune rimwe divi re rotor. Six piston modhi yakawedzera uye yakajairika, kunyangwe gumi nembiri piston modhi haina kunzwika. Kuwedzera kwenhamba yepiston kunoshandiswawo kuwedzera simba rekumanikidza remacalipers.
Kusachengetedza kupisa - neimwe nzira, mabhureki ako anogona kuonekwa semidziyo inoshandura kufamba kuita kupisa. Sezvo motokari inononoka, ose aya emagetsi ekinetic anofanira kuyerera kune imwe nzvimbo, uye mazhinji acho anopedzwa nenzira yekupisa. Kana iwe uchida kushandura kona, kupesana kwese pakati pebhureki pad uye rotor inoburitsa kupisa, sezvinoita mechi inoburitsa kupisa. Kana kupisa kwakanyanya kwakaunganidzwa, bhureki rinotanga kuora kana kutadza. Naizvozvo, zviri nani kufefetera kwebrake caliper, zviri nani kuita kwavo. Saizvozvo, iyo yakakura pamusoro peiyo brake rotor, iyo yakanyanya kupisa inobuda.
Sezvo nzvimbo ye rotor inowedzera, simba rekunamatira repiston rinofanira kuwedzerwa kudzivirira bhureki kubva pakuora. Kana iyo caliper iine piston inodarika imwe (kana mapeya emapiston), pamusoro pebhureki piston inotanga kupiswa nepiston inosunda yakananga kune brake pad kumucheto kwemberi kwecaliper, izvo zvinoita kuti rotor iwedzere kupisa kana ichitenderedzwa. kudzokera ku piston. Saka, kana piston iri pedyo nechekumucheto kwecaliper, inogona kuvandudza kushanda kwayo. Saka musiyano caliper unofanirwa kushandisa diki piston pamberi uye hombe piston kumashure.
Ese aya matekinoroji anogona kuvandudza simba rekubhureki rakapihwa necaliper. Kune mota diki dzisingawanzo kumhanya zvakanyanya, iyi yekuwedzera braking simba haina kudikanwa. Zvisinei, iyo motokari inokurumidza kukurumidza, iyo inowedzera simba iyo inobatsirwa kubva kune yakakwirira-yekuita calipers.